နှစ် ၅၀ ကျော်အကြာမှာ အာရှဖလားကို မြန်မာအသင်း တစ်ကျော့ပြန်ရောက်နိုင်မှာလား
အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲအတွက် မြန်မာအသင်းက ကာဂျစ္စတန်နှင့် မကာအိုအသင်တွေနဲ့ လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပြီး အနိုင်ရခဲ့ရင်တော့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း အာရှဖလားကို တကျော့ပြန်ကစားခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ နောက်ဆုံး ရက်သတ္တပတ်တွေဟာ မြန်မာ့ဘောလုံးသမိုင်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ကာလတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲ အုပ်စု(က)မှာကျရောက်နေတဲ့ မြန်မာအသင်းဟာ မတ် ၂၂ ရက်နေ့မှာ.
ဒီဂျစ်တယ်ဘဏ္ဍာရေးဂေဟစနစ် တည်ဆောက်ရန် Huawei နှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ် လက်တွဲ
အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ဒီဂျစ်တယ် ဘဏ္ဍာရေး ဂေဟစနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် Huawei နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကမ္ဘောဇဘဏ်က ပြောကြားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှိန်းကျိန့်မြို့ရှိ Huawei အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဌာနချုပ်တွင် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ကြေညာချက်ကို ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mike DeNoma က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟု ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်.
အသင့်ဆောက်လုပ်နိုင်သည့် နေအိမ်များ ရောင်းချရန် ဖိလစ်ပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် KT Group တို့ လက်မှတ်ထိုး
အသင့်သုံး prefabricated ပစ္စည်းများဖြင့် ဆောက်လုပ်နိုင်သည့် နေအိမ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပေးသွင်းခြင်းအတွက် သဘောတူစာချုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ KT Group နှင့် ဖိလစ်ပိုင်မှ Revolution Precrafted တို့ ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ “ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် KT Group နှင့်.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေမကောင်း၊ သြစတြေးလျ တွေ့ဆုံပွဲ ဖျက်သိမ်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ “နေထိုင်မကောင်းသောကြောင့်” သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီတွင် အများပြည်သူအား မိန့်ခွန်းပြောရန်နှင့် မေးခွန်းများအား ဖြေကြားမည့် အမေးအဖြေအစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ဟု အခမ်းအနား စီစဉ်သူများက ပြောကြားသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့တွင် မတ် ၁၈ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် ရိုဟင်ဂျာအကြပ်အတည်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ရလာဒ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာရန် တွန်းအားပေးမည်မဟုတ်ဟု အာဆီယံက ပြောကြာ
မန္တလေးတွင် လူစုလူဝေးဖြစ်ပွားရာမှ ရဲက သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲ
မန္တလေးမြို့၊ လမ်း ၈၀ နှင့် ၉ လမ်း၊ ကျုံးမြောက်ဘက်ရှိ ရဲစခန်းရှေ့တွင် ယနေ့ည ၇ နာရီခွဲဝန်းကျင်က လူအယောက် ၃၀ ခန့် စုဝေးခဲ့ကြသည့်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်ပစ်ဖောက်ကာ လူစုခွဲခဲ့ရသည်။